अण्डा खाने सही तरिका के हो ? तारेर कि उसिनेर ? — Bhaktapurpost.com
एजेन्सी । अण्डा स्वास्थ्यका लागि निकै फाइदाजनक हुन्छ । कोही यसलाई पकाएर खान रुचाउँछन् भने कसैलाई उसिनेको अण्डा खान मनपर्छ । कतिलाई भने अण्डा आधा पाकेको मनपर्छ । मानिसहरु सबैभन्दा पहिला स्वादलाई प्राथमिकता दिन्छन् । स्मरण रहोस्, पकाएको र उसिनेको अण्डाको फाइदा भिन्न छन् । प्रश्न यो छ कि अण्डालाई आफ्नो स्वाद अनुसार उसिनेर वा पकाएर खाइरहेका छन्, त्यसले स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ ? यो लेखमार्फत् अण्डा खाने सही तरिका के हो ? त्यसबारे जानकारी लिऔं । साथै यसमा लुकेका गुणबारे पनि थाहा पाऔं ।